दैनिक नुहाउँदा देखिन्छ यस्ता साइड इफेक्ट, रोग प्रतिरोधी क्षमतामा समेत असर - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
२०७८ श्रावण, ९ शनिवार
बाल्यकालदेखि नै, हामीले दैनिक नुहाउने र शरीरलाई सफा राख्ने सल्लाह पाइरहेका छौं। बृद्ध बृद्धा सधैँ भन्छन् नुहाउदा मानिसको आधा रोग काटिन्छ। तर विज्ञानले यो भन्दा फरक कुरा भन्छ। विज्ञहरू भन्छन् कि दैनिक नुहाउनु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरै तरीकाले हानिकारक हुन सक्छ।
हार्वर्ड हेल्थको एक रिपोर्ट अनुसार सामान्यतया स्वस्थ छालाले छालामा तेलको तह र राम्रो ब्याक्टेरिया सन्तुलनमा राख्ने काम गर्दछ। नुहाउँदा माडेर छाला सफा गर्दा यो निस्किन्छ । यस मामलामा तातो पानीले झनै बढी क्षति पुर्याउँदछ ।
विज्ञहरू भन्छन् नुहाइसकेपछि फुस्रो वा रुखो भएको छालाले बाह्य ब्याक्टेरिया र एलर्जी निम्त्याउँछ ।
यसले छालामा संक्रमण वा एलर्जीको जोखिम बढाउँदछ। त्यसैले डाक्टरहरूले मानिसहरूलाई नुहाइसकेपछि छालाको क्रीम प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छन्।
हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई एन्टिबडी बनाउन र शरीरमा प्रतिरोध क्षमता बढाउन सामान्य ब्याक्टेरिया, फोहोर वा सूक्ष्म जीवहरूको एक निश्चित मात्रा चाहिन्छ। यस कारण डाक्टर वा डर्माटोलोजिस्ट बच्चालाई नियमित ननुहाउन सल्लाह दिन्छन् । बारम्बार नुहाउँदा हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीको क्षमता कम गर्न सकिन्छ।
हामीले जुन एन्टिबैक्टीरियल स्याम्पु र साबुनहरू प्रयोग गर्छौं त्यसले छालामा भएको राम्रो ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्न सक्छ। हार्वर्ड हेल्थका अनुसार उनीहरूले छालामा ब्याक्टेरियाहरूको सन्तुलनलाई बाधा पुर्‍याउँछ । यसले फ्रेन्डली ब्याक्टेरिया पैदा हुने जोखिम बढ्छ । जो एन्टिबायोटिक औषधिप्रति अधिक प्रतिरोधी हुन्छन्।
अमेरिकाका प्रख्यात त्वचा विशेषज्ञ डा. लरेन प्लोचका अनुसार छालाको समस्याबाट पीडित व्यक्ति वा धेरै सुक्खा छाला भएका मानिसहरूले अधिकतम् ५ मिनेटभन्दा बढी नुहाउनु हुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूले एक पटकमा एक मिनेट भन्दा बढी समयसम्म सावर लिनुहुँदैन । यो दुबै छाला र कपालको लागि खराब हुन सक्छ।
एनबीसी न्यूजको एक रिपोर्ट अनुसार तातो पानीले शरीरको प्राकृतिक तेललाई छिटो हटाउँदछ र छालालाई छिटो हानी गर्दछ। यो परिसंचरण सन्तुलित गर्न धेरै व्यक्ति धेरै धेरै चिसो वा धेरै तातो पानीले नुहाउँछन्। तर सही हिसाबले हामीले तापक्रम अनुसार पानी प्रयोग गर्नुपर्दछ।
रिपोर्टका अनुसार यदि तपाईसँग छाला सम्बन्धी कुनै समस्या छैन भने तपाई नियमित साबुन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर यदि तपाइँको छालामा सुख्खापन समस्या छ भने यसबाट जोगिन सल्लाह दिइन्छ। वास्तवमा, साबुनले तपाईंको छालामा रहेको प्राकृतिक तेललाई हटाउछ, जसले ड्राईनेसको समस्यालाई बढाउँदछ।
तातो पानीबाट धेरै जोखिम
विज्ञहरूका अनुसार चिसो मौसममा लामो समय तातो पानीको नुहाउनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन । यसले हाम्रो शरीर र दिमाग दुबैमा नराम्रो प्रभाव पार्छ। वास्तवमा, केराटिन नामक स्किन सेल्सको ड्यामेज गर्न सक्छ । जसले छाला चिलाउने, सुख्खपान बढ्ने वा र्यासिससको समस्या निम्त्याउँछ।
विज्ञहरू भन्छन कि तातो पानीले नुहाउँदा आँखाको ओसिलोपन पनि समाप्त हुन्छ, जसको कारण आँखामा हल्का चिलाउने समस्या हुन सक्छ। तातो वा चिसो पानीको सट्टा सामान्य पानी प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
ग्याष्टिकका कारण पेट फुल्ने समस्या छ ? घरमै पाइने यी चिजहरूले तुरुन्त राहत दिन्छ, हेर्नुहोस्
कलेजोलाई स्वास्थ राख्न सजिलै पाइने यी ६ चिजहरुको सेवन गर्नुहोस्
रातो मासु मुटु रोगीका लागि अत्यन्त घातक : अध्ययन
कुन उमेरका मानिस कति घण्टा सुत्ने ? घटी वा बढी सुते गम्भिर असर पर्नसक्ने
रगतको आधारमा स्वास्थ्यसम्वन्धी भविष्यवाणी गर्न सकिने, यस्तो छ कारण
भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने बेसारको अद्भूत फाइदा, यस्ता रोगीहरुका लागि लाभदायक
ब्लड प्रेसर हाई भएको कसरी थाहा पाउने ? यस्ता छन् लक्षणहरू, विज्ञले दिए यस्तो चेतावनी
संसारको सबैभन्दा ठूलो मुख भएको महिला : मुख ६.५२ सेमी खुल्छ, बनाइन् वर्ल्ड रेकर्ड
कोरोनाको लक्षण उमेर र लिङ्गका आधारम अलग अलग हुने विज्ञको दावी, के भने त्यस्तो ?